July 13, 2021 - ApannPyay Media
July 13, 2021 by ApannPyay Media
ဆေးဖြစ်ပေမဲ့ ဘေးလည်းဖြစ်စေတတ်လို့ သိထားသင့်သော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဖက်ဝင်ဟု ဆိုသော်လည်းလောကနိယာမ သဘောအရ အကောင်းနဲ့အဆိုးကတော့ အမြဲဒွန်တွဲလျက် ရှိနေကြစမြဲပါ။ တချို့သစ်ပင်တွေမှာလူသားတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အားသာချက်တွေ တော်တော်များများရှိကြပါတယ်။သို့သော် လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းရည်ချင်း မတူညီကြတာကြောင့် ၎င်းအပင်တွေရဲ့ ဆေးဝါး များဟာ ကိုယ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးသားစနစ်နဲ့ အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်စေတတ်တာကြောင့် သတိပြုသုံးစွဲတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့ပါ၍ သတ်မှတ်ဖော်ညွှန်းထားသော ပမာဏထက်ပို၍ မမှီဝဲ မသုံးစွဲသင့်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း အသိပေး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် (က) ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်၏ ဂျယ်လီ (အနှစ်) ထဲတွင် ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တစ်မျိုးက အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်များကို အလိုလို ပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် မီးလောင်နာ၊ အရေကြည်ဖုနာ၊ ထိခိုက်ရှနာ၊နေလောင်ဒဏ်ရာတို့ကို ကောင်းစွာကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခွဲစိတ်အနာ ချုပ်ရိုးများ ကိုတော့ … Read more
အဘွားကပြောဖူးတယ် ပြုစုတဲ့သူက အရင်သေမှာတဲ့ အခုတော့ သူ့စကားမှန်သွားပီပေါ့လေ
အဘွားကပြောဖူးတယ် ပြုစုတဲ့သူက အရင်သေမှာတဲ့ အခုတော့ သူ့စကားမှန်သွားပီပေါ့လေ အဘိုးကို ပြောထားတာ အဖွားက ဆေးရုံမှာလို့ (တကယ်တော့ အိမ်မှာကတည်းက oxygen ပြတ်ပီးဆုံးသွားပါပီ) သူကလဲ နာတာရှည် နှလုံး ဆီးချိုလဲရှိတော့ ခုထိအမှန်မပြောရသေးဘူး သတိရလားလို့ ေမးကြည့်တော့ အဘိုးက ရတာပေါ့ကွာတဲ့ သံယောဇဥ်တွေရှိတာပေါ့တဲ့ အခုမတွေ့ရတာတောင် သူ့ပုံက ဝမ်နည်းနေတဲ့ပုံ အမှန်သာ ေပြာလိုက်လို့ကတော့ shock ရသွားနိုင်တယ် အိမ်ရှေ့ကို မထွက်ခိုင်းရဲဘူး (အဘွားနာရေးဓာတ်ပုံကြီးတွေ့ရင်……. ) 😭😭😭 အဘွားကသူတစ်ခုခုလိုတိုင်း ပြုစုနေတာလေ (အဘွားကပြောဖူးတယ် ပြုစုတဲ့သူက အရင်သေမှာတဲ့ အခုတော့ သူ့စကားမှန်သွားပီပေါ့လေ) သူမေးတိုင်း လိမ်နေရတာ ခံစားချက်တွေ ဝင်ကြည့် အဘြားကေျပာဖူးတယ္ ျပဳစုတဲ့သူက အရင္ေသမွာတဲ့ အခုေတာ့ သူ႔စကားမွန္သြားပီေပါ့ေလ အဘိုးကို ေျပာထားတာ အဖြားက ေဆး႐ုံမွာလို႔ … Read more
မိခင်အသက်(၃၀)ကျော်အရွယ်မှာမွေးတဲ့ကလေးက ဉာဏ်ရည်ပိုမြင့်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ အမျိုးသမီးတွေအသက်ကြီးမှ ကလေးမွေးတဲ့အခါ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေဟာ ဉာဏ်ရည်မမီခြင်း၊ down syndrome ရောဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ အသက်ကြီးလာချိန်မှာ သတိမေ့ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများခြင်း စတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်တယ်ဆိုပြီး သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်တွေက အမျိုးသမီးတွေ အသက်(၃၀) နောက်ပိုင်းမှမွေးလာတဲ့ကလေးတွေက တခြားကလေးတွေထက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်နိုင်ပြီး၊ အရပ်လည်းပိုရှည်ကာ ပိုပြီးကျန်းမာသန်စွန်းတဲ့ကလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အသက်(၃၀)နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုပါ ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယေဘုယျအားဖြင့် အသက်(၃၀)ကျော်တဲ့အချိန်မှာ ထိုက်သင့်တဲ့အသိပညာနဲ့ ဝင်ငွေအထိုက်အလျောက်ရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေပြီး ကလေးငယ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ အသက်(၃၀)ကျော်အရွယ်မှာ ကလေးမွေးတာက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အသက်(၃၀)နောက်ပိုင်းမှာ အကျအရွယ်ရောက်ပြီလို့ ယူဆကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ … Read more
သွေးတိုးကျစေပြီး နှလုံးရောဂါ သက်သာစေတဲ့ ဘူးသီးရဲ့ ကျန်းမာရေး ဆေးစွမ်းထက်မှုများ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ မီးဖိုချောင် ထဲမှာ အတွေ့ရများတဲ့ ဘူးသီး ဟာ သွေးတိုးကျစေတဲ့ အစွမ်းနဲ့ နှလုံးရောဂါ သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘူးသီးကို ဟင်းခါး အဖြစ် ကျိုချက် သောက်သုံးကြသလို ဘူးသီးကို ပြုတ်ပြီး တို့စားတာ၊ သုပ်စားတာမျိုး လည်း ပြုလုပ်ကြပါ တယ်။ အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဟန်ချက်ညီစေပါတယ် ဘူးသီးမှာ ပြည့်ဝဆီနဲ့ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာ မင်စီ၊ ရိုင်ဘိုဖလေဗင်၊ ဇင့်(သွပ်)၊ သိုင်ယာ မင်၊ သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ် တို့ ပါဝင်မှု များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်း ကို သန့်စင် စေတာ၊ … Read more
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလို အစားလျော့စရာမလိုသော ဗိုက်ချပ်နည်း
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလို အစားလျော့စရာမလိုသော ဗိုက်ချပ်နည်း ဒီနည်းလမ်းလေးက ယုမွန် ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးထဲကတစ်ခုပါ။ ဟိုးအရင်က ပေါင်ချိန် ၁၄၅ပေါင်ရှိခဲ့ဖူးတယ် အရပ်က ၅ပေရဆိုပေမဲ့ အဲ့ပေါင်ချိန်နဲ့က ဝတဲ့ဘက်မှာ ရောက်နေတာပေါ့။ ပိုဆိုးတာက ဗိုက်ပူတာပါ။ ဝိတ်ချလိုက်တာ ပေါင်၁ဝဝဘဲရှိတော့တဲ့အထိပါ။ ခုတော့ ၁၂၂ပေါင်ပါ ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဝလာဝလာ ဗိုက်မပူလာတော့ဘူး။ တကယ်ထိရောက်တဲ့နည်းလေးပါ။ အစားရှောင်စရာမလိုပါဘူး ။သေချာပုံမှန်လေးလုပ်သွားရင် ဗိုက်ချပ်ပြီး ခါးသေးစေပါတယ်။ Gym ဆော့ဖို့လည်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေ အစားလည်းမရှောင်နိုင်တဲ့သူတွေ အဆီကျဆေးတွေ မသောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုပ်သင့်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့နည်းပါ။ မနက်အိပ်ရာထထချင်းမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက် သောက်ပေးပါရေသန့်ဗူးကြီး 1Literရဲ့တစ်ဝက်-0.5liter) (ဒါမှမဟုတ်) သောက်နိုင်တဲ့သူက ၂ဖန်ခွက်သောက်ပေးပါ ပြီးမှ မျက်နှာသစ် အပေါ့ပါးသွားပါ။ မနက်စာကို ရေသောက်ပြီး ၁နာရီကြာမှ စားပါ။မနက်စာစားပြီးပြီးချင်း ရေထပ်မသောက်ရ။နောက် ၁နာရီကြာမှ ရေပြန်သောက်ရမည်။ နေ့လည်စာ … Read more
ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ အောက်စီဂျင်အိုးတွေ တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ မေကဗျာ
ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ အောက်စီဂျင်အိုးတွေ တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ မေကဗျာ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး မေကဗျာကတော့ ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ အောက်စီဂျင်အိုးတွေလှူဒါန်းပေးဖို့ စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။မေကဗျာက အများကြီး လှူဒါန်းချင်ပေမဲ့လည်း ဒီကာလမှာ ခက်ခဲနေကြတာကြောင့် အလှူမခံချင်တဲ့ အတွက် သူတတ်နိုင်သလောက်လေးကိုပဲ လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပါတဲ့။ ကိုဗစ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ မနှစ်ကတော့ မေကဗျာက အလုပ်တွေသေသေချာချာနဲ့ ကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်လို့ အဆင်ပြေပြေနဲ့လှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ဒီနှစ်မှာတော့ လတ်တလော ပြည်သူတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ အောက်စီဂျင် (၁၀)အိုးကို လှူဒါန်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ရသလောက် အရင်မှာယူထားပြီး ရတာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို အရင်ပို့ပေးမှာပါတဲ့။ မေကဗျာကတော့ အခုတစ်ခေါက်မှာ (၁၀)အိုးသားလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ် အဆင်ပြေရင်ပြေသလို ထပ်မံလှူဒါန်းပေးသွားဖို့လည်း စိတ်ကူးထားပါတယ်တဲ့။ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ကြဖို့နဲ့ မပေါ့ဆဖို့ သတိထားကြဖို့ ကိုလည်း တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မေကဗျာကတော့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့နော် … Read more
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြည်သူတွေအတွက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံဆောက်ဖို့ ကော်မတီဖွဲ့ မနေ့ကသီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေအောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်ပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံဆောက်ဖို့ ကော်မတီဖွဲ့လိုက်တဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်….. ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းရဟန်းသံဃာတော်နဲ့သီလရှင်ကျောင်းများ၊အခြားသောဘာသာရေးကျောင်းများနဲ့စစ်ဘေးရှောင်အသီးသီးတို့မှာ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အလှူဒါနလေးတွေကိုလည်းလက်လှမ်းမှီသလောက် ဖောက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. ၁။မူစလင်သက်ကြီးအဖိုးဂေဟာရိပ်သာ (၃၃-ဦး)။ရန်ကုန်မြို့ သို့ – ၁၀၀ အိတ်။ ၂။ မူစလင် အဖွားများသုခရိပ်သာ (၄၃-ဦး) ။ရန်ကုန်မြို့သို့ – ၁၀၀ အိတ်။ ၃။ ကက်သလစ်သီလရှင်များတည်ထောင်သောဘိုးဘွားရိပ်သာ (၁၉၅-ဦး)။ ရန်ကုန်မြို့သို့ – ၁ဝဝအိတ်။ ၄။ ဟိန္ဒူလုမ္ဗနီဘိုးဘွားရိပ်သာ။(၅၅-ဦး) သံလျှင်မြို့သို့ – ၁၀၀ အိတ်။ ၅။ ဆည်းဆာရိပ် ဂိလာနဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ရန်ကုန်မြို့သို့ – ၁၀၀ အိတ်။ ၆။ နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ရန်ကုန်မြို့သို့ – ၁၀၀၀ အိတ်။ ၇။ သဘာဝတရားရိပ်သာ၊(၂၈၃၀-ဦး) သံလျှင်မြို့ သို့ – ၁၀၀၀ အိတ်။ ၈။ မေရီချပ်မင်းဆွံ့အနားမကြားကျောင်း၊ရန်ကုန်မြို့သို့ -၂၅၀ အိတ်။ … Read more
သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ပါ
သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ပါ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ရှိရှိသမျှအိမ်အလုပ် အိမ်ကမိန်းမအလုပ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယောကျ်ားများဖတ်ရန် လူတွေက ဘယ်လိုပဲ သတ်မှတ် သတ်မှတ်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက် အိမ်အလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ မိန်းမကို ကူတယ်လို့ ယောကျ်ားအတော်များများက သတ်မှတ်ကြတာ (၁) ပြန်တွေးကြည့် တစ်အိမ်လုံး အလုပ်တွေ သူတစ်ယောက်ထဲ အကုန် လုပ်ရမယ်ဆို မျှတပါ့မလား (၂) ငါ့မိန်းမကို အိမ်ရှင်းကူတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအိမ်မှာ ငါလဲနေလို့ ငါလဲအိမ်ရှင်းသင့်လို့ ရှင်းတာ (၃) ငါ့မိန်းမကို ထမင်းဟင်းချက် ကူတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလဲစားချင်လို့ ချက်တာ (၄) ငါ့မိန်းမကို ပန်းကန်ဆေး ကူတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလဲ ဒီပန်းကန်တွေ သုံးထားလို့ ဆေးတာ (၅) ငါ့မိန်းမကို … Read more
မှိုအဆိပ်သင့်လျှင် ကုသနည်း နှင့် အဆိပ်အတောက် ရှိသော မှိုများအကြောင်း
မှိုအဆိပ်သင့်လျှင် ကုသနည်း နှင့် အဆိပ်အတောက် ရှိသော မှိုများအကြောင်း အဆိပ်အတောက် ရှိသော မစားကောင်းသည့် မှို များတွင် အောက်ပါ အမှတ် လက္ခ ဏာ များ ပါရှိမည် ဖြစ်သည်။ တယ် ရင်း တို့ ဗဟုသုတ ရအောင် ၁။ မှိုကို ချိုး ၍ လျှာ ဖြင့် တို့ ကြည့် ပါက အလွန်ပူပြီး ငရဲ မီးနံ့ထွက် နေလျှင် မစားသင့် ပါ။ ၂။ မှိုကို ချိုးလိုက်ပါက အလွန်ဖြူ ၍ ပျစ်သော နွားနို့ နှင့် တူသော အစေးများ ထွက်လာလျှင် မစားသင့် ပါ။ ၃။ မှိုပေါ်တွင် … Read more
ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံ နှင့် ချွေးပေါက်ကျယ်တာတွေအတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းချဉ်သီးနည်းလမ်း
ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံ နှင့် ချွေးပေါက်ကျယ်တာတွေအတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းချဉ်သီးနည်းလမ်း ခရမ်းချဉ်သီးမှာ မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ lycopene ဓါတ်ဟာ အရေပြားအတွက် အထူးပင် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အသားအရေ လှချင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီး များများစားပါလို့ ပြောကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ အရေပြား အတွင်းရော အပြင်ကိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ။ မျက်နှာမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဝက်ခြံ ၊ ဆားဝက်ခြံတွေကို အထူး ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး ချွေးပေါက် ကျယ်တွေကိုလည်း ကျဉ်းစေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ။ မျက်နှာ အသားအရေကိုလည်း ပိုပြီး ဖြူလာစေပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ကြည့်ရအောင် … Read more
ပျံလွန်တော်မူပြီးတာ တစ်လကျော်ကြာပြီးသော်လည်း ၁၀၈ တောင်ဆရာတော်ကြီး၏ ဆံတော်များရှည်လာနေ
ပြေတီဦး နဲ့ အူဝဲ အလွတ်စာရင်းတွင် ပါဝင်လာကြောင်းသိရှိရ၊ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ
မိတ်ကပ် မကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက် ၅ ချက်
ငွေတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ လုပ်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး ၆ မျိုး
ယနေ့ စက်တင်ဘာ၂၆ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၁မြို့နယ်မီးပြတ်မည်
စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို စားသောက်ကုန်တွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေဆန်းတို့ဇနီးမောင်နှံ
ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးမှာ ပစ်ချခံထားခဲ့ရတဲ့ လူငယ် (၆)ဦး
၂ရရက်နေ့အတွက် မိုးကြီးရေလျှံပီး သတိထားရမယ့် ဒေသများ
ရန်ကုန်မြို့က စက်ဘီးစီးပြီး Delivery လိုက်ပို့ပေးနေတဲ့အသက် 68နှစ်အရွယ် အဘကျော်